Shirkadaha Daabula Badeecooyinka Oo Soo Badanaya: Faaido & Qasaaro
Tan iyo sanadkii 2013 waxaa dalka kusoo badanayay shirkadaha ka shaqeeya daabulka (shirkadaha badeecada kasoo qaada ama u qaada dibadda) kuwaasi oo ganacsatada u sahla soo dajinta badeecada kala duwan ee dibadda ay ka keenaan.
CMA waa mid kamida shirkadaha ugu caansan ee leh qaar ka mid ah Konteenarada shixnadaha lagu keeno dekedda Magaalada Muqdisho.
Shirkadda CMA waxaa ay adeegan Soomaaliya ka bilowday sanadkii 2014 xilligaas oo ganacsatada ay dhibaato ku qabeen daabulka badeecadaha kala duwan ee dekadda Muqdisho laga soo dejin jiray.
Maxamed Cabdiraxmaan Cilmi waa maamulaha shirkadda lagu magacaabo East Africa Shipping Company oo Soomaaliya wakiil uga ah shirkada CMA oo soo kordhisay in badeecada lagu soo qaado konteenaro halka markii hore maraakiibta la isaga raseyn jiray kadibna gawaarida xamuulka ah lasii saari jiray.
Maamulaha Shirkadda East Africa Shipping Company oo Goobjoog Business la hadlay ayaa ka warbixyay adeegyada kala duwan ee ay ganacsatada u qabtaan. Waxa uuna sheegay in waqtiyadii hore ganacsatadu ay dhib ku qabeen soo daabulidda badeecooyinka.
‘’Waxaan u fududaynaa keensashada alaabaha, anaga oo daafaha dunida ganacsatada uga keena dalabaadkooda, sidoo kale waxaan u fududaynaa adeegga wax soo dhoofsashada oo waqtigii hore dhibaato badan lagu qabay” ayuu yir Maxamed C. Cilmi.
Waxa kale oo uu guddoomiyaha sheegay in xilliyadii hore alaab furfuran maraakiibta lasoo saari jiray kadibna dekedda Muqdisho la keeni jiray taasoo sababi jirtay in ay badeecada burburto.
Inta badan ganacsatada wax kasoo dejiya dekedda Magaalada Muqdisho ayaa aaminsan in ay adeeggan uu yareeyay qarashkii iyo khasaarihii soo wajihi jiray ganacsatada Soomaaliyeed ee wax kasoo dagsada dekedda.
Maxamed Socdaal Kheyre waxa uu kamid yahay dadka ka faaideystay adeegga shirkadda CMA. Goobjoog Business ayaa wax ka weydiisay adeegga loo qabto iyo waxa faaidada uu kahelo shirkadaha wax daabula. Mr. Socdaal ayaa sheegay in uu faaido badan ku qabo, waxuuna ku tilmaamay in ay u fududeyso soo dhoofsiga alaabaha noocyadooda kala duwan.
Dhanka kale Cabbaas Maxamed Xasan oo ah ganacsade dhoofiya sisinta waqti dheerna howshan ku guda-jiray ayaa Goobjoog Business u sheegay in doomo yaryar ay waqtigii hore u isticmaali jireen dhoofinta khayraadka dalka. Hase-ahaatee waqti xaadirkan Cabbaas waxa uu sheegay in uu helay adeegyo fiican oo ay kamidyihiin qaboojiyeyaal u suurageliya in sisinta ay muddo badan badda ku jiri karto iyada oo aan is badalin.
Dhanka kale dekedda Muqdisho waxaa ka xoogsan jiray kumanaan xamaalato ah oo maraakiibta iyo doomaha dushooda alaabaha uga soo dejin jiray ganacsatada, si’ay noloshooda uga maareeyaan waxa kasoo gala muruq maalkooda. balse hadda waxaa muuqata in arrintaasi ay meesha ka baxday oo waxaa maraakiibta badeecada oo kunteenaro ku jirta kasoo dajiya ama lagu saaraa wiishash dhaadheer.
Xirsi Faarax waxa uu ka midyahay dadkii ka xamaalan jiray dekedda Magaalada Muqdisho hadase isaga tegay kadib markii wiishash dhadheer oo maraakiibta badeecada kasoo dejiya la keenay dekedda, waxa uuna Goobjoog Business u sheegay in shaqadii xamaaliga aheyd ay meesha kabaxday.
‘’Waan iskaga tagay dekedda kadib markii la joojiyay inta badan howshii aan qaban jirnay oo ahayd in maraakiibta aan alaabaha furfurka ah kasoo dejino, aniga iyo xamaalatadii kaleba waan ku shaqo waaynay” Xersi Faarax ayaa sidaa kusoo gabogabeeyay hadalkiisa.
Shirkadaha bixiya adeegan ayaa intooda badan isku arka in ay buuxiyeen boos muhiim ah oo ka banaanaa ganacsiga sidoo kalena ay ganacsatada u fududeeyeen u soo daabulillada badeecooyinka iyo alaabaha iyo dhoofinta khayraadka dalka oo lageeyo wadamo badan oo caalamka ah. Waxaana sidoo kale jira dad ku shaqo waayay adeegyada ay bixiyaan darteed.